अशक्त भएपछी श्रीमानले छोडे, मागेर अ*शक्त भाईसहित ४ जनाको परिवार पाल्दै सरिता – PathivaraOnline
Home > समाचार > अशक्त भएपछी श्रीमानले छोडे, मागेर अ*शक्त भाईसहित ४ जनाको परिवार पाल्दै सरिता
admin July 28, 2019 July 28, 2019 समाचार	0
काठमाडौ। २२ वर्षको उमेरमै अ*शक्त भाई सहित ४ जनाको जिम्मेवारी काधमा बोकेर सडकमा माग्दै हिडछिन सरिता सुनार । उनलाई अ*चानक ज्वरो आएर कम्मर मुनि नचल्ने भएको उनि बताउछिन । यसो त उनि आफै पनि अ*शक्त त्यो माथि परिवारको जिम्मेवारी कठिन छ उनको जीवन।
बुवाले पनि कान्छी ल्याए पछी आमा र भाई सहित काठमाडौँमा संघर्ष गर्दैछिन । उनि साथमा आफ्नो बुहारी लिएर सडकको गल्लि गल्लिमा माग्दै उपचार खर्छ जुटाउछिन । श्रीमानको बिषयमा बोल्न नचाहेका सरिताले आफु अ*शक्त भए पछी श्रीमानले छोडेर गएको बताउछिन । अहिले उनि संग ४ जनाको परिवार रहेको छ ।
कयौ पटक आ*त्म*ह*त्या गर्न कोशिस गरेको तर मर्न नसकेको उनि बताउछिन । हामीले उनलाई भेटेर केहि कुराकानी गरेका छौ तलको भिडियोमा हेर्नुहोला ।
हेर्नुहोस नारकीय जीवन जिउदै पूर्वलडाकु, मनै भक्कानिएर आउने यस्तो छ अबस्था!
चेपाङबस्तीकाे पीडाः निर्दयी सरकार! रोपाई गरेर कमाएको १० हजार रुपैयाँ र नागरिकता पनि जल्यो